Camp @ Cloudcroft Cozy Cabin - I-Airbnb
I-indlu eyakhiwe ngamapulangwe ephelele ibungazwe ngu-Clay
U-Clay unokuphawula okungu-28 kwezinye izindawo.
Siyakwamukela ku-The Camp at Cloudcroft! Siyabonga ngentshisekelo yakho ku-Campground yethu. Sisanda kuthuthukisa isofthiwe yethu ukuze sivumele ukubhukha ngesikhathi sangempela. Wamukelekile kakhulu ukuthi ubhukhe ngale njini yokusesha, kodwa ukuze uthole ulwazi olusheshayo mayelana nokutholakala "kwesikhathi sangempela", sicela uvakashele i-The Camp at Cloudcroft website. Abasebenzi bethu bahlola izicelo zokubhuka kabili ngosuku, ekuseni nantambama. Ngokubhuka okusheshayo noma ukutholakala kwesikhathi sangempela, bhukha ngokuqondile kuwebhusayithi yethu kuzoshesha!
Ikhabhinethi isendaweni yokukhempa enokuthula amakhilomitha angu-17 kuphela ukusuka e-Cloudcroft, e-NM. Uzoyithanda indawo yami ngenxa yesikhala esingaphandle. Indawo yami ilungele izithandani kanye nabathanda ukuzidela ngabodwana. . Izinkanyezi eziningi zibuka !!! Futhi ikhishi elineBath Egcwele (ibhavu neshawa). Idekhi eneChiminea kanye ne-BBQ Grill etholakalayo. YEAR RUND TUB HOT TUB (kwabiwe nezihambeli zeKhabhinethi Yomndeni) Futhi finyelela ePavilion enhle yokubuka i-TV/Sports kanye neziko elinekhishi eligcwele!
Izivakashi ziyakwazi ukufinyelela emfuleni kanye ne-pavilion e-Campground. Izivakashi nazo zamukelekile Emicimbini Yamakamu njengamakhonsathi, Inhlanhla Yembiza kanye nemicimbi Yokudla. Ezinye izinto okufanele uziqaphele kulesi silungiselelo sehlathi elithulile: Ngaphakathi kwe-Campground, kukhona umfudlana wokudoba (udinga ilayisense - lezi zithengiswa e-Camp Office) Okunye okukhangayo okuseduze zifaka i-Hiking, imizila ye-ATV, enye imifudlana, ukudoba echibini, ukuzingela, ukushushuluza eqhweni, igalofu, umculo, ukudla, iwayini, ubuciko neminye imikhosi.
I-Camp e-Cloudcroft iyi-Pet Friendly Family Campground; siyakwamukela futhi siyaqonda ukuthi izilwane ezifuywayo ziyingxenye yomndeni wakho. Ngezinjongo zokuphepha nokuhlonipha abanye abakampeni, sicela ugcine izilwane ezifuywayo zibambene NGAZO ZONKE izikhathi ngaphandle kwenkambu yakho endaweni yokukhempa. Siyabonga ngosizo lwakho nokuqonda kwakho, The Camp at Cloudcroft Staff. Ukuze uthole ulwazi olwengeziwe mayelana nemithetho nemihlahlandlela yendawo yokukhempa, ikhophi yamaphepha izonikezwa ngesikhathi sokungena. Izilwane ezifuywayo azivunyelwe Emakhabetheni noma Ezingxenyeni Zokungcebeleka.
Ngemva kokuthi uthathe isikhathi sokuziphumuza, vele uhambe imizuzu engu-2 ukusuka epaki ukuya edolobheni laseMayhill noma ukhuphukele endaweni eyimfihlo egcinwe kahle e-New Mexico, Cloudcroft ukuze uthole okuhlangenwe nakho okumangalisayo. Isimo sezulu ngokuvamile sihlala ngaphansi kwama-degree angu-84 ehlobo, indawo enhle kakhulu yokuzipholela nomndeni unyaka wonke.
Ngemva kokuthi uthathe isikhathi sokuziphumuza, vele uhambe imizuzu engu-2 ukusuka epaki ukuya edolobheni laseMayhill noma ukhuphukele endaweni eyimfihlo egcinwe kahle e-New Mexico…